Kooxaha Mogadishu City Club iyo Dekedaha oo bar-dhac ku kala baxay kulan qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League – Gool FM
Dajiye June 28, 2021
(Muqdisho) 28 Juun 2021. Kooxaha Mogadishu City Club iyo Dekedaha ayaa bar-dhac 1-1 ah ku kala baxay kulan qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League oo galabta ka dhacay Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxaha Mogadishu City iyo Dekedaha ku kala nasteen bar-bardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 50-aad kooxda Mogadishu City Club oo hoggaanka u qabatay ciyaarta ayaa waxaa gool u dhaliyay xiddigooda Lambarka 7-aad Catoosh, dheesha ayaa sidaas ku noqotay 1-0.
Laakiin 74 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Dekedaha ayaa waxay la timid goolka bar-bardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay Anwar Shakuundha.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay bar-bardhac 1-1 ah oo ay ku kala baxeen Kooxaha Mogadishu City Club iyo Dekedaha, ciyaar qeyb ka aheyd horyaalka Somali Premier League oo galabta ka dhacday Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.